Bad Guys Always Die (2015) | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Action \_ Bad Guys Always Die (2015) Bad Guys Always Die (2015)
Qiangzi ဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားမှာနေထိုင်ရင်း မူလတန်းကျောင်းမှာ တရုတ်စာ ကျောင်းဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်…
ဂျယ်ဂျူးကျွန်းကို လည်ပတ်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ထွက်လာစဉ်မှာပဲ လမ်းခရီးမှာ ကားမတော်တဆဖြစ်ထားတာကို တွေ့ရှိပြီး ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ အမျိုးသမီး (Ji-yeon) ကိုကူညီကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်…
လမ်းမှာ ရဲလှည့်ကင်းကားကိုတွေ့တာကြောင့် အကူညီတောင်းစဉ်မှာပဲ ရုတ်တရက် Ji-yeon ဟာ ရဲအရာရှိကို ပစ်သတ်လိုက်တာကို တွေ့မြင်ချိန်ကစ အရာရာဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ..
ကြောက်လန့်ပြီး ချက်ချင်းထွက်ပြေးလိုက်နိုင်လို့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကတော့ လွတ်သွားပေမယ့် Qiangzi နဲ့ သူ့ညီလေး ကတော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ဘူး…ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်ဆီမှာ Ji-yeon ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ပါလာခဲ့ပါတယ်…
အသတ်ခံရတဲ့ ရဲ Body ကို ရဲကားနဲ့ သယ်ပြီး သွားတိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာလဲ ရုတ်တရက် Body ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ရဲကားနောက်ခန်းထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိတာကြောင့် အထင်လွဲခံရပြီး ရဲကိုအကြမ်းဖက်မှု့နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံရပြန်ပါတယ်..
လွှတ်မြောက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ဟာ Qiangzi တို့ ညီအကို ကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားသလို သူတို့နဲ့အတူပါသွားတဲ့ အိတ်ကိုလဲ Ji-yeon က အရေးတကြီးပြန်လိုအပ်နေပြန်တယ်… Ji-yeon က Qiangzi တို့ ညီအကို ကို ဖမ်းထားရင်း ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ၂ ယောက်ကို ရှာရင်း တချိန်တည်းမှာပဲ ကြေးစားလူသတ်သမားရဲ့ လိုက်လံသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ရှောင်ပြေးနေရင်း…
ကိုရီးယားကိုလာလည်တဲ့ တရုတ်လေးတွေ – ပင်စင်ယူကာနီး ကိုရီးယားရဲအရာရှိအဖိုးကြီး – သွေးအေးအေးနဲ့ နောက်ကနေ တလျှောက်လုံးလိုက်သတ်နေတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက် – လူသတ်မှု့နဲ့ သံဒယအရှိဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတဦး သူတို့အားလုံးရဲ့ ဆက်နွယ်မှု့တွေကို တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ပြသချိန် ၁ နာရီ နဲ့ မိနစ် ၅၀ ရှိပြီး အစမှအဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကား တကားပါပဲ..ကိုရီးယား နဲ့ ဟောင်ကောင် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကား ဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ဆွဲဆောင်သွားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ… မိသားစုနဲ့ရော သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တကားဖြစ်ပါကြောင်း…
2015, Hong Kong, Korea
THIHA | Action, Comedy, Crime | 22/02/2016 10:07 am
THIHA - Previous